afak’omaly ka azo sambo-belona ny enina, maty voatifitra nandritra ny fifanjevoana teny Amboanjobe ny iray ary mbola karohina ny telo amin’izy ireo. Teny Analakely sy Anosy no nahasamborana azy ireo, nandritra ny poa-basy izay nampivarahontsana ny manodidina.
Tratra teny amin’izy ireo ny basy poleta efatra sy basy lava iray samy mahery vaika sy voafahana bala izay voalaza fa na ny polisim-pirenena aza tsy afaka mitana izany. Voarohirohy tamin’ny vono olona maro, tahaka ny fanafihana "cash point" teto an-drenivohitra sy ilay Pasitera teny Antohomadinika, ny mpamilin’ny orinasa JB teny 67ha, mpiasan’ny compagnie Vidzar Anosizato, mpambongady teratany karana teo Anosibe ary ilay mpivarotra paty sahirana ara-pivelomana tetsy amin’ny tetezan’i Bekiraro tamin’ny zoma teo.
Voalazan’ny tompon’andraikitra teo anivon’ny polisim-pirenena, nandritra ny fampitam-baovao ho an’ny mpanao gazety omaly teo Anosy fa nisy porofo sy fanadihadiana lalina nahafantarana ireo saingy mbola anatin'ny tsiambaratelon'ny famotorana ho amin'ny fitsarana izany. Anisan'ny nanampy ny polisy ny “caméra de surveillance” mielipatrana manerana ny tanàna. Hanohy ny fanadihadiana hahafantarana ny tompom-basy ny mpitandro ny filaminana. Mbola raharaha maro hafa koa no anenjehana ireo tratra ka mety afaka roa andro vao hiakatra fampanoavana ireo azo sambo-belona.